Ao anatin'ireo vanim-potoana manamarika ny fiainana ny fanambadiana ary anisan'ny lehibe indrindra. Tsy ny olon-drehetra no miditra amin'ny fanambadiana, fa ho an'ireo izay manao izany, ny fanambadiana dia mitondra fihaikana manokana nefa koa fitahiana manokana. Anisan'izany fitahiana izany ny firaisaina ara-nofo. Fanehoam-pitiavana lehibe tokoa izany fanomezana izany, amin'ny fotoana sy ny toerana mety : ao anatin'ny fanambadiana.
Mifanohitra amin'izay mety ho hevitry ny maro, ny Baiboly dia tsy manohitra ny firaisana ara-nofo tsy akory. Ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy izany fanomezana avy amin'ny Mpamorona ho an'ny taranak'olombelona izany no toheriny.
Iray amin'ireo boky ao amin'ny Baiboly tsy dia be mpamaky loatra ny tononkiran'i Sôlômôna, izay milazalaza ny amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny vehivavy ampakarina, ilay Sôlemita sy ilay tiany izay inoan'ny olona fa ny mpanjaka Sôlômôna. Maneho ny zava-miafin'ny fifandraisana akaiky eo amin'ny olombelona sy ny fifaliana ao amin'ny fitiavana ifampizaran'ny mpivady eo anivon'ny tokantrano izany boky izany. Na dia oharina matetika amin'ny tandindon'ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olony, sy ny fifandraisan'i Kristy amin'ny fiangonana aza ny Tononkiran'i Sôlômôna dia tononkalo miresaka momba ny fitiavana aloha izany, izay hita eo amin'ny fifandraisan'ny olombelona lahy sy vavy iray.
Amin'ity herinandro ity isika dia hijery ny amin'ny fanambadiana araka ny fomba iresahan'ity bokin'ny TT ity azy.